Kaliya saddex ciyaaryahan ayaa hal sano ku wada guuleystay abaal-marinta da’yarka sanadka Premier League ee PFA iyo abaal-marinta Ururka qorayaasha kubadda cagta – Gool FM
Kaliya saddex ciyaaryahan ayaa hal sano ku wada guuleystay abaal-marinta da’yarka sanadka Premier League ee PFA iyo abaal-marinta Ururka qorayaasha kubadda cagta
(Manchester) 29 Abriil 2019. Weeraryaanka kooxda kubadda cagta Manchester City iyo xulka qaranka England Raheem Sterling ayaa ku guuleystay maanta abaal-marinta xiddiga sanadka ee ay bixiyaan ururka qorayaasha kubadda cagta, kaddib markii uu xalay ku guuleystay abaal-marinta da’yarka sanadka ugu fiican ee Premier League.
Sterling waxa uu dhaliyey 17 gool oo horyaalka Premier League isagoo dhiibay 12 gool oo kale xilli ciyaareedkan, iyadoo kooxdiisa Manchester City ay ku guuleysan karto sanadkeedii labaad oo xiriir ah horyaalka Premier League haddii ay guul gaarto labada kulan ee u harsan.
Weeraryahankii hore ee kooxda Liverpool oo iminka 24-sano jir ah ayaa noqday ciyaaryahankii afaraad ee kooxda Manchester City oo ku guuleysta abaal-marinta xiddiga sanadka ee qorayaasha kubadda cagta kaddib Don Revie oo hantay 1954/55, Bert Trautmann oo ku guuleystay xilli ciyaareedkii xigay ee 1955-56 iyo Tony Book kaasoo abaal-marintan wadaagay laacibkii hore ee Derby ee Dave Mackay xilli ciyaareedkii 1968/69.
Sterling ayaa helay 62% codadkii laga qaaday 400 oo xubno ka ah qoreyaasha kubadda cagta, waxaana uu abaal-marinta ku garaacay difaaca Liverpool ee Virgil Van Dijk, iyadoo xiddiga reer Holland uu isna Sterling xalay ku garaacay abaal-marinta xiddiga sanadka ee Premier League.
Weeraryahanka ay kooxda Manchester City ka wada tirsan yihiin Sterling ee Sergio Aguero ayaana ka soo muuqday kaalinta saddexaad, halka ay sidoo kale codod heleen Bernardo Silva, David Silva, Harry Kane, Eden Hazard iyo Alexandre Lacazette.
Dhinaca kale xiddigta ugu fiican dhanka dumarka abaal-marintan sanadka ee ay bixiyaan ururka qorayaasha kubadda cagta waxaa ku guuleysatay gabadha iyana ka tirsan kooxda Manchester City ee Nikita Parris.
Haddaba kaliya saddex ciyaaryahan ayaa ku guuleystay abaal-marinta da’yarka sanadka ugu fiican Premier League ee PFA iyo abaal-marinta Ururka qorayaasha kubadda cagta ee Premier League hal xilli ciyaareed gudihiis.
Waxaana saddex ciyaaryahan ee kaliya ku guuleystay sanad isku mid ah abaal-marinnada PFA Young Player of the Year iyo FWA Player of the Year ay kala yihiin; Cristiano Ronaldo oo labadaan abaal-marin isku darsaday sanadkii 2007, Gareth Bale oo ku wada guuleystay labadaan abaal-marin sanadkii 2013-kii iyo Raheem Sterling oo wada qaaday sanadkan 2019.
Sidee loogu kala guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka Premier League ee PFA tan iyo markii bixinteeda la bilaabay?